एन्ड्रोइड फोन नेपाली भाषामा कसरी चलाउने? - inaruwaonline.com
एन्ड्रोइड फोन नेपाली भाषामा कसरी चलाउने?
प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर २३, २०७२ समय: १८:०२:३५
हामीमध्ये धेरैलाइै हाम्रो एन्ड्रोइड मोबाइल वा डिभाइसहरु नेपाली भाषामा चलाउने इच्छा हुन सक्छ। धेरै देशहरुमा आफ्नै देशको भाषामा डिभाइसहरु चलाउने गरेको भएपनि नेपालमा भने यो कम नै रहेको छ। तर जसलाई नेपाली भाषामै आफ्ना डिभाइसहरु चलाउने इच्छा भएकाहरुलाई एन्ड्रोइडमा नेपाली भाषा चलाउने प्लेटफर्म रहेको छ।
गुगलले एन्ड्रोइड डिभाइसहरुमा धेरै भाषाहरु ल्याइसकेको छ जसमा नेपाली भाषा पनि एक हो। विन्डोज पीसीमा भएको नेपाली भाषाले अंकहरु र केही शब्दहरु मात्र नेपालीमा देखाउँछ भने यसमा धेरै किसिमका परिवर्तनहरु देख्न सकिन्छ।
एन्ड्रोइड फोन नेपाली भाषामा चलाउनका लागि सबैभन्दा पहिले सेटिङ (Setting) मा जाने र सेटिङ अन्तरगत ल्याङ्ग्वेज एण्ड इन्पुट (Language and Input) (मोबाइलको प्रकार अनुसार फरक नाम हुन सक्ने) मा गएर ल्याङ्ग्वेज (Language) मा क्लिक गर्ने र नेपाली भाषा छान्ने।
अंग्रेजी भाषामा चलाइरहेको बानी भएका हामीलाई नेपाली भाषा सुरुमा अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ र केही कुरा त नबुझिन पनि सक्छ। आफुलाई चाहिएको निश्चित कुरा सुरुसुरुमा नभेटिन पनि सक्छ तर विस्तारै बानी पर्दै गएपछि सहज हुन्छ।
आफ्नो डिभाइसमा नेपाली भाषा चलाउनुअघि केही अप्ठ्यारा शब्दहरुका बारेमा राम्ररी सिकेर चलाउनु उपयूक्त हुन्छ। उदाहरणका लागि Applications लाई अनुप्रयोग, Sharing लाई साझेदारी, Update लाई अध्यावदिक, Network लाई सन्जाल, Installed लाई स्थापित आदि हुनसक्छन्।